တောင်ငူ၌ ရထားလမ်းဖြတ်သော သစ်တင်အိမ်စီးကားကို လူစီးအမြန်ရထား ဝင်တိုက်မိ၊ ယာဉ်မောင်းပါ နှစ?? - Yangon Media Group
တောင်ငူ၌ ရထားလမ်းဖြတ်သော သစ်တင်အိမ်စီးကားကို လူစီးအမြန်ရထား ဝင်တိုက်မိ၊ ယာဉ်မောင်းပါ နှစ??
တောင်ငူမြို့နယ် တွင် ရထားလမ်းဖြတ်သော သစ် တင်အိမ်စီးကားကို လူစီးအမြန် ရထားက ဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယာဉ်မောင်းပါနှစ်ဦး စိုးရိမ်ရအ ခြေအနေရှိကြောင်း သိရသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့ ပိုင်း)၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ကံရိုး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်သုံးပင် ကျေးရွာအတွင်း တောင်ငူမြို့၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ မီးရထားဝင်းနေ စက် ခေါင်းမောင်း ဦးကြည်ထွန်း (၅၃)နှစ်မောင်းနှင်လာသော အတွဲ ခုနစ်တွဲပါသည့် နေပြည်တော်-ရန်ကုန် အမှတ် ၃၂၊ အစုန် လူစီး အမြန်ရထားသည် မေ ၄ ရက်၊ နံနက် ၁ဝ နာရီ မိနစ် ၄ဝ ခန့်က ရန်ကုန်-မန္တလေး မီးရထားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၆၈/၁၁) နှင့် ( ၁၆၈/၁၂) ကြား အရောက်လမ်း ၏ အရှေ့ဘက်မှ အနောက်ဘက် သို့ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ မရမ်းကုန်း ကျေးရွာနေ ယာဉ်မောင်းကိုနေမျိုး အောင်(ခ)ချက်ကြီး (၂၈)နှစ် မောင်းနှင်ပြီး တစ်ရွာတည်းနေ ယာဉ်နောက်လိုက် ကိုမျိုးသူ(၂၆) နှစ်လိုက်ပါစီးနင်းလာသည့် AERAS အမျိုးအစား အိမ်စီးယာဉ်အား ဝင် ရောက်တိုက်မိခဲ့ကြောင်း တောင်ငူ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
အိမ်စီးယာဉ်နောက်ခန်းတွင် ပျဉ်းကတိုးကြမ်းပြား ဝ ဒသမ ၇တန် တင်ဆောင်လာကြောင်း တောင်ငူ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ အခင်းဖြစ်စဉ်တွင် ယာဉ်မောင်း ကိုနေမျိုးအောင်(ခ)ချက်ကြီးနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက် ကိုမျိုးသူတို့နှစ်ဦး မှာ ဒဏ်ရာများရရှိပြီး တောင်ငူ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ရဲဆေးစာဖြင့် ပို့ဆောင်ပြီး အတွင်းလူနာ (စိုးရိမ် ရ)အဖြစ် ကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း တောင်ငူမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရ သည်။ အခင်းဖြစ်ပြီးနောက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် အမြန် ရထားမှာ ရန်ကုန်ဘက်သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရသည်။
တောင်ငူမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအ ရာရှိတစ်ဦးက ”ကားကအိမ်စီးယာဉ် သစ်တွေတင်လာတယ်။ သစ်ကိစ္စ ကတော့ သစ်တောက ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေတယ်။ ဖြစ်တာက လမ်းကူးမှာဖြစ်တာ”ဟု ဒီမိုကရေစီ တူဒေးသို့ မေ ၄ ရက်တွင် ပြောသည်။ ယင်းအမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တောင်ငူမြို့မရဲစခန်းတွင် (ပ) ၅၅၉/၂ဝ၁၉၊ မီးရထားပို့ဆောင် ရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေပုဒ်မ ၈၅ ဖြင့် ယာဉ်မောင်းနေမျိုးအောင် (ခ) ချက်ကြီးအား အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားသည်။ အလားတူ မေ ၄ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီခွဲခန့်ကလည်း မွန်ပြည် နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ နှစ်ကရင်ကျေး ရွာအတွင်း နှစ်ကရင်နှင့် အနင်း ဘူတာအကြား ကားလမ်းနှင့်ရထား လမ်းဆုံရာ ဘုန်းကြီးလမ်းဝအ ထွက်တွင် ရန်ကုန်မှထားဝယ်သို့ မောင်းလာသည့် အတွဲ ၁ဝ တွဲပါ သည့် အဆန်အမြန်ရထားမှအာရှ လမ်းမကြီး မောင်းလာပြီး ရထား လမ်းဖြတ်သော ကုန်ကားအားဝင် တိုက်ပြီး ပေ ၈ဝခန့်အကွာထိ ဆွဲချသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်၏ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖြေရှင်းမှုကို ပါလက်စတိုင်းတို့ ဘာကြောင့် လက်မခံ
သီရိလင်္ကာတွင် ဗုံးဖောက်ခွဲ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ကျဆင်း
ကြည်လင်းက ဦးကိုနီကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခဲ့သော်လည်း ကိုနေဝင်းကို ၎င်းပစ်ခဲ့ ခြင်းမဟုတ် ဟုဆို
ဒေါ်လာဈေးများ ပြန်လည် ကျဆင်းလာသောကြောင့် မကွေးမြို့တွင် နှမ်းနက်တစ်တင်း ကျပ်တစ်သောင်းခန်